Ixabiso lecadastral: yintoni, ifuthe lezinto kunye nendlela yokufumana | Ezezimali
Encarni Arcoya | 31/05/2021 20:10 | Ukuhlaziywa ukuba 31/05/2021 20:12 | indawo yokuhlala
Ixabiso le-cadastral lelinye lamagama esiwathanda kakhulu. Kodwa ezona sizithiye kakhulu. Kungenxa yokuba kukho amaxesha apho eli xabiso linokubangela ukuba sifumane iindaba ezilungileyo; kwaye kwangaxeshanye kufuneka sikrobe iipokotho zethu ukujongana neerhafu ezoyikekayo.
Kodwa, Yintoni ixabiso lecadastral? Yenzelwe ntoni? Ibalwa njani? Namhlanje siza kuthetha nawe ngokweenkcukacha malunga nale kota ekufuneka uyazi ngentloko.
1 Yintoni ixabiso cadastral
1.1 Ixabiso leCadastral kunye nexabiso lovavanyo
2 Izinto ezichaphazela ixabiso le-cadastral
3 Ungalibala njani ixabiso le-cadastral yearhente yokuthenga izindlu nomhlaba
3.1 Kunye irisithi ye-IBI
3.2 Ngereferensi yecadastral
4 Ungalicenga njani ixabiso kwiCadastre
5 Yintoni na?
Yintoni ixabiso cadastral
Ixabiso lecadastral li Uqingqo-maxabiso olunikezelwa kumhlaba nomhlaba ngendlela yokuba kuqinisekiswe ukuba lixabiso lini eli. Umzekelo, masithi unendlu kwisitrato "esityebileyo" ngokufanelekileyo. Ixabiso le-cadastral yelo khaya liza kuba phezulu ngendawo, kodwa nangendlela indlu eyiyo.
Ngokwenyani, Iikhrayitheriya zokuvavanya sele zichongiwe libhunga ledolophu ngalinye ngendlela engafaniyo kwesinye isixeko nakwezinye, nangona ifana kakhulu.
Zonke ezi zinto zithengiswa ngokunyanzelekileyo zibhaliswe eCadastre, yona eqokelela ixabiso lazo zonke izindlu nomhlaba. Yinkqubo yasimahla kunye neyasesidlangalaleni, ke unokubonisana ngokulula nazo zombini izinto ezizezakho kunye nezinye.
Ixabiso leCadastral kunye nexabiso lovavanyo
Baninzi abathi, ngempazamo, bacinge ukuba ixabiso le-cadastral kunye nexabiso elilinganisiweyo ziyafana, kanti ngokwenyani azinjalo. Uvavanyo lwentsebenzo lusetyenziswa xa ucela ukubambisa, kwaye eli xabiso linokuphakama okanye liphantsi kune-cadastral.
Ukongeza, yeyona isetyenziselwa ukuseta ixabiso lokuthenga okanye lokuthengisa lolo lungileyo. Elinye inqaku ekufuneka lithathelwe ingqalelo, ixabiso lokuxabisa liyaguquguquka ngokweemeko zeemarike, ngendlela enokuthi nangaliphi na ixesha elinokuthi libe nokuxabisa ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Izinto ezichaphazela ixabiso le-cadastral
Nangona singenakukuxelela yonke into eya kuba nefuthe kumfanekiso wokugqibela, kukho izinto ezithile ezimisela, ukuya kwinqanaba elincinci okanye elincinci, kwixabiso lepropathi. Zezi:
Indawo okanye indawo. Oko kukuthi, indawo apho kulungile kwaye kujikeleze oko.
Izinto ezisetyenziselwa ukwakhiwa. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa nendlela eyakhiwe ngayo, indleko, umgangatho, ubudala bepropathi ...
Ixabiso lentengiso. Ewe, ixabiso elinokufikelelwa yile ndawo yokuthengisa izindlu nomhlaba kwimarike nalo liphembelela ngandlela thile, kukuthenga okanye ukuthengisa. Ke ngoko, kuya kufuneka uyazi ukuba ixabiso le-cadastral alisoze lidlule kwixabiso lentengiso. Ingxaki kukuba oku kuthetha ukuba kufuneka kubekho ukuhlaziywa rhoqo kwelo xabiso le-cadastral ukwenzela ukuba lihambelane nento esiyithethileyo.
Ungalibala njani ixabiso le-cadastral yearhente yokuthenga izindlu nomhlaba
Khawufane ucinge ukuba unayo iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, nokuba yindlu, iflethi, indawo ... Ungafuna ukwazi ukuba yintoni ixabiso layo le-cadastral,
Ukuyibala, Kuya kufuneka wongeze zombini ixabiso lomhlaba kunye nelokwakha. Kule ndawo kufuneka kongezwe iikhrayitheriya ezithile ezichazwe yimimiselo yoomasipala. Kungenxa yoko le nto singenakukuxelela ngqo ifomula, kodwa kungcono ukuba siyazi ukuba yeyiphi le migaqo yovavanyo kunye nedatha elandelayo:
Umgangatho kunye nobudala bepropathi.
Imbali, inkcubeko, ixabiso lobugcisa.
Ngayiphi na imeko, awunyanzelekanga ukuba uphambane ubuza ezi datha, kuba zimbini iindlela zokwazi ixabiso le-cadastral ngaphandle kokwenza izibalo. Ezi fomu zezi:
Kunye irisithi ye-IBI
Njengoko uyazi, yonke into ethengisa izindlu nomhlaba kufuneka ibhengezwe eCadastre kwaye, phantsi kwexabiso le-cadastral, kuya kufuneka uhlawule irhafu, akunjalo? Ewe, kwirisithi ye-IBI, ehlawulwa rhoqo ngonyaka, ixabiso lepropathi yepropathi iyabonakaliswa.
Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa Kuyachithwa kwelinye icala ixabiso lehlabathi olakheleyo; kwaye kwelinye, ixabiso lolwakhiwo.
Kwimeko apho ungenayo irisithi, kodwa uyakhumbula ukuba uhlawule malini, ungayibala ngokulula. Ewe kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni irhafu esetyenzisiweyo kuwe (ufumanisa ukuba kwiRegistry yePropathi).
Enye indlela yokufumana ixabiso le-cadastral yendawo yokuthengisa izindlu nomhlaba ikwisalathiso se-cadastral, oko kukuthi, nge ikhowudi enamanani angamashumi amabini echaza into nganye elungileyo. Ukuba unayo, nokuba ikwi-Intanethi okanye ngokutsalela umnxeba iCadastre, banokukunika inombolo ofuna ukuyazi.
Ungalicenga njani ixabiso kwiCadastre
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ixabiso le-cadastral ayisiyo "yabucala" okanye umntu ofihliweyo. Isesidlangalaleni kwaye, nokuba ungumnini wale asethi yoluntu, unokufikelela kulwazi oluthile.
Ewe akufani nokuba ungumnini ophetheyo kunaleyo ungeyiyo. Ukuba awunguye umnini, kuphela kwedatha oza kuba nakho ukufikelela kuyo Zizo zilandelayo:
Sebenzisa okanye usiya khona.
Isicelo seli xabiso singenziwa kwi-intanethi okanye ngomnxeba kwaye ngenxa yoko kuya kufuneka unxibelelane neCadastre, eliliqela elilawula yonke le datha.
Ngaphambi kokuba sikuxelele ukuba ixabiso le-cadastral libalulekile kwiirhafu. Kwaye kunjalo, ngokusekwe koku uya kuhlawula ngaphezulu okanye ngaphantsi. Ngokukodwa, iirhafu ezichaphazela ixabiso lokuthengiswa kwezindlu Zizo:
Irhafu yengeniso yomntu
I-IBI (Irhafu yokuThengisa izindlu).
IP (IRhafu yoButyebi).
Inzuzo eyinkunzi kamasipala (Irhafu kamasipala ngexabiso lomhlaba).
Ilifa kunye nerhafu yesipho.
ITPAJD (Irhafu kudluliso lwepropathi kunye nezenzo zomthetho ezibhaliweyo).
Ngaba ixabiso le-cadastral licacile kuwe ngoku? Khumbula ukuba, ukuba unamathandabuzo, iCadastre inokukunceda wazi ukuba kutheni umhlaba wakho uneli xabiso hayi elinye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » indawo yokuhlala » Ixabiso leCadastral